NK | मुल्यको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा दालजन्य खाद्यवस्तुमा प्रतिकिलो २० रुपैयाँसम्म मुल्य वृद्धि ,केमा कति? [सूचीसहित]
मुल्यको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा दालजन्य खाद्यवस्तुमा प्रतिकिलो २० रुपैयाँसम्म मुल्य वृद्धि ,केमा कति? [सूचीसहित]
काठमाडौं- आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भएसँगै दालको मूल्यमा प्रतिकिलो २० रुपैयाँसम्म वृद्धि भएको छ।
सरकारले केही खाद्यवस्तुमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ बाट लागु हुने गरी मूल्य अभिवृद्धि कर बढाएपछि व्यापारीले अहिलेदेखि नै मूल्य बढाएका हुन। खाद्यवस्तुमा मूल्यवृद्धि हुनुको अर्को कारणका रुपमा कर्मचारीको तलबवृद्धि तथा सामाजिक सुरक्षाभत्तामा भएको वृद्धिलाई पनि मुख्य कारणका रुपमा हेरिएको छ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले खाद्य वस्तुको बजार मूल्यका बारेमा अध्ययन गरेकोमा दालजन्य खाद्यवस्तुको मूल्यमा अत्यधिक वृद्धि भएको देखिन्छ। विभागले बजेट अघि र बजेट पछिको बजारको अवस्था अध्ययन गरेको हो। जेठ ११ गतेको खुद्रा बजार मुल्य र जेठ २८ गतेको खुद्रा बजार मुल्यको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा दालजन्य खाद्यवस्तुमा प्रतिकिलो २० रुपैयाँसम्म मुल्य वृद्धि भएको देखिएको हो।
विभागको तथ्याङ्कअनुसार बजेट अघि प्रतिकिलो सय रुपैयाँ रहेको मसुरो दाल बजेटपछि बढेर प्रतिकिलो १ सय २० रुपैयाँ पुगेको छ। त्यसैगरी, मास दाल प्रतिकिलो १ सय ५ रुपैयाँबाट बढेर १ सय १५ रुपैयाँ पुगेको छ। रहर दाल प्रतिकिलो १ सय २५ रुपैयाँबाट बढेर १ सय ४० रुपैयाँ, खोस्टा भएको मुंगीदाल प्रतिकिलो १ सय ३५ रुपैयाँबाट बढेर १ सय ५० रुपैयाँ र खोस्टा नभएको मुगीदाल प्रतिकिलो १ सय ४० रुपैयाँबाट बढेर १ सय ५० रुपैयाँ पुगेको छ।
खाद्य वस्तुहरुमा दालजन्य वस्तुको मूल्य सबैभन्दा बढी बढेको देखिन्छ। गेडागुडीको मूल्यमा पनि प्रतिकिलो ५ देखी १० रुपैयाँसम्म वृद्धि भएको छ। जेठ ११ गते प्रतिकिलो १ सय रुपैयाँ रहेको केराउ जेठ २८ गतेसम्म आईपुग्दा १ सय १० रुपैयाँ पुगेको छ।
नेपाल खाद्य किराना व्यवसायी संघको तथ्याङ्कले पनि बजेट भाषणपछि खाद्य वस्तुमा एकाएक मूल्यवृद्धि भएको देखाउँछ। पछिल्लो चार महिनायताको खाद्य वस्तुको तुलनात्मक विश्लेषण र सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भएपनि अहिलेको बजार मूल्य हेर्दा यस अवधिमा अधिकांश खाद्य वस्तुमा एकाएक मूल्य बढेको छ।
संघले उपलब्ध गराएको खाद्यवस्तुको मूल्यसूचीलाई बजेअघि जेठ ५ गतेको मूल्य र बजेटपछि जेठ २० गतेको मूल्यलाई आधार मानेर तुलना गर्दा यस अवधिमा मात्रै मूल्यमा ठूलो अन्तर देखिन्छ।
जेठ ५ गते प्रतिकिलो १ सय रुपैयाँ रहेको मुसुरो दाल जेठ २० गते १ सय ५ रुपैयाँ पुगेको छ भने जेठ २८ गतेसम्ममा १ सय १५ रुपैयाँ पुगेको छ। त्यसैगरी रहर, मुंगी, राजमा, भटमासलगायत दहलनजन्य खाद्य वस्तुमा अस्वभाविक मुल्य वृद्धि भएको देखिन्छ।
आँटामा बढ्यो प्रतिकिलो ५ रुपैयाँ
सरकारले बजेटमार्फत् आँटा तथा मैदामा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने घोषणा गरेलगत्तै आँटाको मूल्यमा प्रतिकिलो ५ रुपैयाँ बढेको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ अर्थात आगामी साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी उक्त व्यवस्था ल्याएको भएपनि व्यवसायीले भने अहिल्यैदेखि मूल्य वृद्धि गरेका छन्।